Inotora nguva yakareba sei kuvharwa kwekatsi? Uye kutemwa? | Noti Katsi
Inotora nguva yakareba sei kuvharwa kwekatsi? Uye kutemwa?
Kurasa nyama kana kusarerekera mhuka dzisingade kusimudzwa nderimwe remabasa makuru atinawo sevachengeti vawo. Nehurombo, vana vazhinji vanopedzisira vasiiwa, vachigara mumigwagwa kana, mune zvakaipisisa, vachibatwa kunge marara.
Asi, Inotora nguva yakareba sei kuvharwa kwekatsi? Uye kutemwa? Kana iri kekutanga kuti iwe utore feline kuti ishande kuitira kuti irege kuva nekiti, zvinokwanisika kuti kumwe kwekusahadzika kwauinako ndeichi. Uye ndezvekuti, hapana munhu anoda mhuka idzi anoda kuzviona zvakashata, uye kunyangwe mashandiro aya achiitwa nevarapi vezvipfuyo mazuva ese, tichiziva hazvititadzise kunetseka uye kunyangwe kutya.
Kuita kuti chinyorwa chiwedzere kurongeka, isu tichaenda kuona kuti chii chinonzi sterilization uye chii chinonzi castration.
1 Chii chinonzi feline sterilization?
2 Chii chinonzi feline kutorwa?
3 Matipi ekubatsira chipfuwo chako mushure mekutenderera / kurasa
4 Nei chipfuwo chako chichifanira kunge chisina kufamba kwakanyanya
4.1 Zvirinani pasina dzimba dzekugezera
4.2 Tarisa uone incision
4.3 Isa kora yaElizabethan paari
Chii chinonzi feline sterilization?
Mbereko Iko kuvhiya uko kunosanganisira kusunga mapopu machubhu kune vanhukadzi, uye kucheka seminiferous ducts kune varume. Iyo nguva inotora chiremba wemhuka kuti iite inenge maminetsi makumi matatu kusvika makumi mana, mushure meizvozvo rinosiiwa mukeji kusvikira ramuka. Izvo zvishoma zvinokanganisa kupfuura kutemwa, saka iyo yekudzoresa inokurumidza zvikuru: kubva pamazuva maviri kusvika mashanu.
Nekudaro, iyo mhuka icharamba iine kupisa, saka hunhu hwaingave hwakatora kubva pairi, ndiko kuti, kunyanyisa kucheresa kati, uye "hasha" dzekati hadzizonyangarika.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvekuvharwa kwekatsi, pinda iyi link yatichangobva kukusiya.
Chii chinonzi feline kutorwa?
Kusungwa Iko kuvhiya kunosanganisira kubvisa maronda epabonde, nekudaro kubvisa chero mukana wepamuviri asi, pamusoro pezvo, zvinomutadzisawo kuva nehumwe kupisa. Panyaya yemukadzi, chibereko nemazai zvinogona kubviswa, izvo zvinozivikanwa seovariohysterectomy; kana kungoita mazai, mune iyo mamiriro angave oophorectomy. Kana iri yechirume, machende anobviswa.
Iyo nguva inotora chiremba wemhuka kuti iite ingangoita maminetsi makumi matatu kana ari murume, uye awa kana ari mukadzi.. Kuva kuita kwakaomesesa, kune vazhinji varapi vezvipfuyo vanosarudza kuchengeta mhuka mukiriniki kana muchipatara kusvika zuva rinotevera. Nekudaro, inenge isina kupora zvizere kusvika mazuva 7-10 apfuura (kunyangwe zvichizonzi: katsi inoda kumhanya nekutamba pazuva rechipiri; uye mukadzi pamazuva 3-4 anotanga kudzoka pane zvaaiita. ).
Matipi ekubatsira chipfuwo chako mushure mekutenderera / kurasa
Mazuva ayo anogona kupfuura mushure mekutenderera anogona kunge akareba, nekuti chauri kuda ndechekuti chipfuwo chako chipore nekukasira uye chigare zvekare. Kunyangwe izvozvi chinonyanya kukosha ndechekuti iwe unomuchengeta zvakanaka kuitira kuti azive kuti anodiwa uye kuti, pamwe nechengetedzo yaunomupa, kupora kwake kuri nekukurumidza sezvazvinogona.
Haasi ese katsi anopora panguva imwe chete, nekuti sevanhu, vane yavo yavo mutinhimira yekuporeswa. Zvakakosha kuti iwe umuchengete uye uteedzere kuraira kwachiremba wemhuka kuitira kuti akurumidze kupora. Asi pamusoro pezvo, isu tiri kuenda zvakare kukupa iwe mamwe matipi ane chokwadi chekukuitira iwe.
Rangarira kuti kana katsi yako isina kupora zvizere uye iwe uchibvumidza zviitiko zvisina kudzivirirwa, izvi zvinogona kutungamira kumatambudziko uye nemhedzisiro. Chinhu chingakonzera kuti iwe uchiri kuda imwe nguva yekugadzirisa uye yakawanda nguva yekutarisira. Uye ndezvekuti sezvazviri mune zvese zvehupenyu huno, zvirinani kudzivirira pane kurapa!
Nei chipfuwo chako chichifanira kunge chisina kufamba kwakanyanya
Chimwe chezvikonzero nei katsi kana katsi yako ichifanira kuchengetedza zviitwa zvavo zvichirambidzwa iri nekuti panzvimbo yekuvhiya kana mhuka ichifamba zvakanyanya, suture inovhurika. Kana aya masuture akavhurwa zvizere mumhuka hapazove nechinodzivirira ura uye dzimwe nhengo kubva mukubva mumuviri, zvichikuvadza chipfuwo uye zvingangoita kuti zvive nerufu. Izvi zvinonyanya kuitika kune vanhukadzi.
Kana vari varume, kufamba kwakanyanyisa kunogona kukonzera kubuda ropa Ichazadza isina slag sac uye inogona kutungamira mukuparara kwakanyanya kana kumanikidza kwakakwana kuchiwedzera uye kunogona kurwadza zvakanyanya.
Zvirinani pasina dzimba dzekugezera
Izvi zvinogona kuve zvinonyengera, kunyanya kana kati yako ichida kugezwa nekuti yakasviba, asi zviri nani kudzivirirwa. Kana iwe ukashambidza chipfuwo chako mushure mekuvhiyiwa panogona kuve nenjodzi kuhutano hwake. Hutachiona hunogona kupinda munzvimbo yekuvhiya ndokukanganisa nzvimbo yacho. Zvirinani kuti kana iwe uchida kugeza katsi yako unozviita nesipo isina mvura yaunowana muzvitoro zvezvipfuyo.... Asi haufanire kuishandisa mune chero nharaunda padyo nekuvhiyiwa uye ndoda pairi.
Tarisa uone incision
Izvo zvakakosha kuti iwe utarise pet yako incision kaviri pazuva. Izvi zvinonyanya kukosha nekuti hauzomboziva kana chimwe chinhu chisina kujairika chingave chichiitika kunze kwekunge uchinyatso kuzvitarisa. Ita kuti chipfuwo chako chifambe pamusoro pezvose kuti uone kuti ane vanga sei. Tarisa kutsvuka, kuzvimba, uye / kana kubuda.
Panogona kuve nekupwanya, kutsvuka, kana kuzvimba apo chipfuyo chako chinopora. Nekudaro, kana ukasazvitarisa kaviri pazuva, hauzive kana paine shanduko yenguva dzose pakuonekwa kweiyo incision. Kana paine shanduko inoshamisa mune iyo incision, unofanira kutora chipfuwo chako kudzokera kukiriniki kunoongororwa zvakare.
Isa kora yaElizabethan paari
Makola eElizabethan isarudzo dzakanaka dzembwa nekitsi dzinovhiyiwa mhando iyi, nenzira iyi unodzivirira kubva kunanzva kana kubata ronda (panjodzi yekuritapurira uye kuita kuti riwedzere). Zviri nyore kuti iwe uzviyeuchidze iwe pachako kuti usatsvage pane chinhu chinorwadza kana chinonzwika, asi zvinosuwisa kuti zvipfuwo zvedu hazvikwanise izvi!
Iyo kora inzira yakanaka yekuchengetedza chipfuwo chako kuti chisakuvara. Mhuka dzinovaraidza dzinotora mazuva mashoma kuti dzijairire iyo kora, asi kana iwe ukaichengeta pane iyo nguva dzese, ivo vanozojaira iyo nekukurumidza. Zvichengete zviripo pese paunotadza kunyatso tarisa chipfuwo chako.
Izvi zvinoreva kuti kana iwe wakarara, iwe hausi pamba, kana kana iwe uri mubishi kugadzirira kudya kwemanheru kana kutarisa terevhizheni uye chipfuwo chako hachisi chaicho muchiratidzo chako. Zvinoshamisa kuti nekukurumidza sei vanogona kuruma pasi uye kutsenga pamasuturu uye kuvaburitsa kunze kana iwe usingakwanise kumisa ipapo ipapo. Edza kuyeuka kekupedzisira iwe pawakatemwa waive uchirapa uye nekurumwa kwakatanga kuoneka pakati pemazuva mashanu neasere gare gare ... Huye, zvimwechetezvo zvinoitika kune chipfuwo chako asi haana simba rekuramba kuda muvare.
Mushure mekunge katsi yako yaitwa oparesheni, iwe unofanirwa kumuchengeta achidzivirirwa kubva pakufamba kwevhiki mbiri. Izvi zvinoreva kuti hapana kumhanya, kusvetuka, kutamba mitambo, kuenda-kuregedza kufamba, kana kusarambidzwa. HAPANA zano rakanaka rekusiya chipfuwo chako muchivanze chisina kuchengetwa mushure mekuvhiyiwa. Usashambidze chipfuwo chako uye chengetera kora nguva dzose.
Kugumisira asi kusiri kupedzisira, tarisa iyo incision kaviri pazuva kuve nechokwadi kuti chiri kupora zvakanaka. Kana uine zvauri kunetseka nezvekuvhiya kwechipfuwo chako, unogona kumutora kuenda kun'anga mukati memazuva mashoma anotevera kana kumufonera kuti agone kugadzirisa zvese zvinokunetsa.
Rangarira kuti kusarerekera uye kuripa kwakakosha kuti katsi dzese dzidzivise kuwanda kwevanhu uye kuvadzivirira kubva pakubata zvirwere muhupenyu hwavo hwese. Iyo ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo kune chako chipfuwo, pamwe newe, pamwe nekatsi nharaunda nenzanga mune zvakajairika. Ibasa rako kuti chipfuwo chako chisaregedzwe kana kuraswa kuitira kuti chigone kurarama hurefu uye hunofadza hupenyu newe.
Kunetseka munhu. Izvi zvinoreva kuti tinoda mhuka dzedu. Asi kana vet ari nyanzvi yehunyanzvi, matambudziko haafanire kumuka. Kukurudzira kwakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Inotora nguva yakareba sei kuvharwa kwekatsi? Uye kutemwa?
Katsi dzinodya chii kana dziri diki?
Ungadzidzise sei katsi yemwedzi miviri yekuberekwa